Iindawo ezi-5 eziPhambili eziMbi kakhulu ezivela kwi-Batman TV Series Intro
Iinqununu eziPhezulu eziPhezulu ezi-5 ezininzi ze-Batman TV Series
by UBrian Cronin
I-20 ye-Century Fox Television
Iingqungquthela ze- Batman TV zama- 1960 zafumana iresiphi emangalisayo kwimiboniso ephumelelayo kwi-Gallery yeBatman's Rogues Gallery sele ikhethwa ngokukhethekileyo kweendawo zokuhlaselwa kumlando wencwadi yamahlaya. Xa udibanisa abalinganiswa abakhulu njengoJoker, Riddler, Catwoman kunye nePenguin kunye nabalingisi abaphezulu abafana noCesar Romero, uFrank Gorshin, uJulie Newmar noBurgess Meredith, umphumo wokugqibela wawunombulelo omkhulu kumabonwakude. Nangona kunjalo, uchungechunge luvelise iziganeko ezili-120 kwimizuzu emithathu nje. Ngokwemvelo, abo bathathu abadlali babengenakubonakala ngathi kaninzi, ngoko ke kwakufuneka iindidi ezahlukahlukeneyo zokubonisa indawo (kwaphela kwaba ngama-37 abahlali beentlanzi kwi-show), kunye nabadlali abathandwayo abaninzi bexesha elifuna indawo yeenkwenkwezi ezithandayo. Ngabantu abaninzi abahlaseli kunye nabadlali abaninzi, bekufuneka kubekho iindawo ezimbalwa. Apha, ke, awona mahlanu aphezulu kunabo bonke abavela kwi-series ye- Batman TV ye-1960.
5. Umhlolokazi omnyama
Inxaxheba enkulu yokugqibela yeTallulah Bankhead yayibuhlungu kukuba inxaxheba ekunciphiseni njengoMhlolokazi Omnyama, owenza ubundlobongela ngokukhunjulwa kwengqondo ngamaxhoba akhe. Ekupheleni kwexesha lesibini likaBatman, ukulawula ingqondo sele kusekho iprojekthi yecala elukhuni kwi-series (kubandakanya enye ye-surreal ebandakanya i-Liberace!) Kunye noMhlolokazi omnyama akazange anikezele ngakumbi ukubonisa ukuba abe nolwazi icebo (nangona wayenelungelo elimangalisayo lesigcawu). Enye into enomdla kweli qhekeza kukuba kwakukho iingxelo ezifihliweyo ngaphakathi kwesiqwenga kuzo zonke iinkampani ezazishumayela kwiBatman ngelo xesha.
Abavelisi bathatha inqabileyo enomdla ukusuka kwisiqhelo kunye ne-Van Johnson's Minstrel, kodwa ubuncinane kule ngxaki, ukuphuka kwabo kwi-cliché iphelile ukwenza ingxabano enhle kwi-cliche ngokwayo. I-Minstrel yayingumntu othandekayo owamthiyile ubudlova (nakuba wayengenayo ingxaki yokuzama ukubulala uBatman noRobin basebenzisa ezinye iindlela). Ngoko nangona kwakunzima ukuzonda umlingiswa, ngexesha elifanayo kwakunzima ukukhathalela ngaye enye indlela okanye enye. Akuzange kuncede ukuba i-Minstrel "i-Robin Hood ene-lute" shtick ayizange yenze ingqiqo xa i-supervillain gimmick yayingumntu ongeyomnxeba onokwenza i-market market. Kwakungenakunceda ukuba iziqwenga zikaJohnson zivezwe nje emva kweeveki ezimbini emva kokuba u-Art Carney naye adlala umlinge ogqoke njengeRobin Hood (Umcibisi).
3. Lola Lasagne
Umdlalo we-Broadway u-Ethel Merman wayengekho ndawo njengexhoba lePenguin ngokukhawuleza waba ngumdlali wakhe emva kokuba iPengun ibambe iPasasol eyayixabisekileyo (ufana neepasasol / imbule njengePenguin ngokwakhe). Baza kunye nesicwangciso sokukhohlisa kwintambo yamahhashi ebandakanya iqela lakhe lokuncintisana lomqhubi, elibizwa ngokuba yiParasol. Baceba ukutshintsha i-Parasol ngehashe elilahlayo bese ufaka iParasol phantsi kwegama elingamanga njengexesha elide, ukwazi ukuba iParasol yangempela izokutshatyalaliswa ngokukhawuleza inkohliso. U-Merman ngokucacileyo uhamba nje ngeemeko kulo lonke iqela. Wavumela ababhali ukuba benze ihlaya elihle malunga nomtshato wakhe omncinci umtsalane u-Ernest Borgnine (kumbukiso, uLola watshata noLuigi Lasagne kwiiveki ezintathu ngaphambi kokuqhawula, njengoMerman noBerggnine).
UFrank Gorshin's Riddler mhlawumbi wayengumdlali obalaseleyo kulolu hlobo, kodwa ingxaki yayiyiyo yokuba uGorshin wayesazi, ngoko wayefuna imali eninzi ukuba ibonakale kwiNkcazo 2. Abavelisi bolu chungechunge babecala baze baqesha umdlali we-Shakespearian uMaurice Evans ngomzuzu wokugqibela Wabhala kwakhona iNgqungquthela yesi-2 i-parter emibili ejoliswe ukuba i-Riddler ingene inkwenkwezi entsha, i-Puzzler. Umtshini we-slapdash ukusuka kwi-Riddler ukuya kwi-Puzzler kunye nokuzama ukusebenza kwi-Shakespearian bent kwi-character character kushiywe iziqwenga eziphantsi, nangona u-Evans enelungelo lokunyusa. Emva kokuzama okufanayo ukutshintsha iGorshin kunye noJohn Astin njengo-Riddler, abavelisi bangena ngaphakathi baza bazisa uGorshin njengo-Riddler kwiNkcazo 3.
1. uNora Clavicle
Uchungechunge lweBatman ngokubanzi luqala ukubheka ixesha elide kwizinyo ekupheleni kwexesha lesithathu, eligqityiweyo lokuba liyokugqibela. Oku kwakunokwenzeka ukuba yinto ehle kakhulu yonyaka, kunye noBarbara Rush bachitheka njengabasebenzi bamalungelo obhinqa uNora Clavicle olawula ukubizwa ngokuba nguKomishinari omtsha weGeorham City. Emva koko ubeka endaweni yamapolisa amadoda kunye nabafazi basekhaya. Kukho konke okukhokelela kwinqanaba elibandakanya iilbotic (kuba, ngokuqinisekileyo, amagosa asepolisa amantombazana aya kunkwantya iigundane ukwenza imisebenzi yawo) aya kuyisebenzisa ukuze aqhube iGoham aze aqokelele kwi-inshurensi yemali. Le ngqungquthela yayingumntu wezesondo nakwiimeko ekupheleni kweminyaka yama-1960, yinto yezobulili!
Indlela Yokuba Indwendwe KwiDkt. Phil Show
Ukudlala njani umdlalo 'Ukwahlukana kweMidlalo'
Indlela yokuLawula ngokufanelekileyo umsebenzi
Inkqubela yeMfundo: Indlela abantwana abayifunda ngayo
I-Litany yaseSaint Joseph
Igama laseTaliyane loLuku: I-Quando
Ziziphi iilwimi ezininzi?
Amabhayisikobho e-Classic Classic Alawulwa nguKumkani Vidor
Ngaba Amanzi aBhotile analo Ubomi beShelf?
Indlela yokwenza iiHomeschool ukuba Usebenza ngaphandle kweKhaya
Ulwimi lweKrisimesi Izifundo zezifundo
Indlela Imiqulu Yezobugqirha Ukubonelela Ngayo Ubomi kwiBondage
Imfazwe Yehlabathi II: USS West Virginia (BB-48)